BLAKE3 yakachengeteka, inokurumidza uye inofananidzwa cryptographic hash basa | Linux Vakapindwa muropa
BLAKE3 es cryptographic hash basa , que inozivikanwa nekukurumidza kupfuura MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3 uye BLAKE2, pamwezve yakachengeteka, kusiyana neMDC5 neSHA-1. Uye yakachengeteka pakurwisa kureba, kusiyana neSHA-2.
Iyo inofananidzwa zvakanyanya pamhando ipi neipi yetambo uye nzira dzeSIMD, nekuti iwo Merkle muti mukati uye ine akasiyana-isina algorithm, iyo iri kukurumidza pa x86-64 uye zvakare pane zvidiki zvivakwa.
BLAKE3 inovimba nechiitiko chakakwidziridzwa cheiyo yakasimbiswa hash basa BLAKE2 uye mune yekutanga Bao muti modhi. Magadzirirwo uye dhizaini yekugadzira anowanikwa paBLAKE3 bepa. Iko kusakwana kwekuburitsa saizi ndeye mazana maviri nemakumi mashanu emabheti.
Mune iyo hash chizvarwa bvunzo ye16 KB faira, BLAKE3 ine 256-bit kiyi inopfuurisa SHA3-256 ne17 nguva, SHA-256 ne14 nguva, SHA-512 9 nguva, SHA-1 ka6 uye BLAKE2b ka5.
Iri igap rakakosha rinosara kunyangwe panogadziriswa yakawanda data, semuenzaniso BLAKE3 yakazoita kasere nekukurumidza kupfuura SHA-8 kana uchiverenga hash ye256GB yedata isina kujairika.
Iyo yekuvandudza mashandiro yakawanikwa nekudzora huwandu hwekutenderera kubva gumi kusvika pa10 uye hashing mabhuroko zvakasiyana mu7 KB chunks. Sekureva kwevagadziri, ivo vakawana chinomanikidza humbowo hwemasvomhu hwekuti iwe unogona kuwana neanomwe maround pachinzvimbo chegumi uchichengetedza iwo mwero wakaenzana wekuvimbika.
Panguva imwecheteyo, vamwe vaongorori vanoratidza kusahadzika, vachitenda kuti kunyangwe parizvino maround manomwe akakwana kurwisa kurwisa kwese kunozivikanwa mune hashes, ipapo mamwe maround matatu anogona kubatsira kana kurwisa kutsva kukaonekwa mune ramangwana.
Iko hash basa yakagadzirirwa maficha akadai seyakavimbika chokwadi chefaira, meseji yekusimbisa uye data dhizaini ye cryptographic digital masiginecha. BLAKE3 haina kugadzirirwa hashing mapassword, sezvo iwo achivavarira kuenzanisa hashes nekukurumidza sezvazvinogona (kune mapassword, zvinokurudzirwa kushandisa inononoka hash uye escrypt, bcrypt, scrypt, kana Argon2 mabasa).
Basa rehash riri mubvunzo harina basa nehukuru hwedhata iri kugadziriswa uye inodzivirirwa pakurwisa kwekurovera uye kurwiswa kwepamberi.
Iyo algorithm yaive yakagadzirirwa nevanozivikanwa vekunyora mifananidzo uye inoenderera mberi ichivandudza iyo BLAKE2 algorithm uye inoshandisa Bao michina yekukomberedza blockchain muti. Kusiyana neBLAKE2 (BLAKE2b, BLAKE2s), BLAKE3 inopa imwechete algorithm yemapuratifomu ese iyo isina kusungwa kuhupamhi hwehurefu uye size yehash.
Kana ari block kutsemuka, muna BLAKE3 rwizi rwakatsemurwa kuita 1 KB chunks uye chunk yega yega inoshambidzwa zvakazvimiririra. Hashi hombe inoumbwa pahwaro hwechidimbu hashes zvichibva paMerkle binary muti.
Kupatsanurana uku kunotendera kugadzirisa dambudziko rekufananidza kugadzirisa data kana uchiverenga hashi; semuenzaniso, unogona kushandisa 4-tambo SIMD mirairo kuumba panguva imwe chete kuita 4-block hashes. Yetsika SHA- * hash mashandiro anoita data zvakateedzana.
Zvimwe zve BLAKE3 maficha ndeaya:
Kushanda muPRF, MAC, KDF, XOF modes uye senguva dzose hash;
Iyo algorithm yezvivakwa zvese, nekukurumidza pane ese ari maviri x86-64 masisitimu uye 32-bit ARM processor.
Nezve iyo misiyano mikuru pakati peBLAKE3 neBLAKE2:
Uchishandisa chimiro chemuti wemabhinari kuti uwane kufananidzwa kusingagumi mune iyo hash kuverenga.
Kuderedza huwandu hwekutenderera kubva gumi kusvika pa10.
Maitiro matatu ekushanda: Hash, Keyed Hash (HMAC) uye Key Generation (KDF).
Iko hakuna kwekuwedzera pamusoro kana hashing kiyi nekuda kwekushandiswa kwenzvimbo yaimbogara nekiyi paramende block.
Yakavakirwa-muchina yekushanda muchimiro cheExpensible Output Function (XOF) iyo inobvumira iyo
kuenzanisa uye kuisa (tsvaga).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » BLAKE3 yakachengeteka, inokurumidza uye inofananidzwa cryptographic hash basa
Manjaro 2021-07-28, nyowani yakagadzikana kugadzirisa pamwe nekuvandudza kunyanya kweKDE neLibreOffice 7.1.5